Android 6.0 marshmallow inogadziridza iyo lg v10 yepasi rose musiyano inoenda inorarama
Kuru Nhau & Ongororo Android 6.0 Marshmallow inogadziridza iyo LG V10 yepasi rose musiyano inoenda inorarama
Android 6.0 Marshmallow inogadziridza iyo LG V10 yepasi rose musiyano inoenda inorarama
Varidzi veLG & apos; s mbiri-yekupfura kumberi cam gamba foni, iyo eponymous V10, yakanga iine zvishoma zvekumirira kuti iite kune Android Marshmallow gadziriso. Asi pasina nguva, LG yakaunza pane zvivimbiso uye ndokutanga kudyara iyo Android 6.0 yekuvandudza kune chishandiso & apos; s epasi rose musiyano muSouth Korea, Turkey, uye pamwe nedzimwe nyika pasi rese. Zvinotaridza sekuti vashandisi havatore & maapos; t vari kutora iyo nyowani emojis yakawedzerwa mune vhezheni 6.0.1, asi zvekare, LG ine yayo yakasarudzika-yakagadzirirwa kutaura mune yayo software.
Kuyera kukomberedza 850MB, iyo yekuvandudza inorovera iyo phablet & apos; s software vhezheni kuV20b ine iyo yekuvaka nhamba MRA58K. LG yaunza huwandu hwesitoko Android Marshmallow mashandiro kune phablet, senge simba-rinoponesa Doze Mode, Direct Kugovana, marongero matsva eapp nemvumo, yakagadzirwazve yakanyarara mode, uye ine simba otomatiki kupenya kugadzirisa, pakati pezvimwe zvinhu. Zvakare, QMemo + yakapihwa zita rekuti Capture +, uye LG Bridge yava kunzi LG AirDrive. Akaipa!
Kutumira kumutsiridza, Knock Code ikozvino inoda akawanda se6 matepi mune angangoita matatu makona akasiyana eiyo skrini kuti ashande. Vamwe venyu mungafanira kudzidza imwe nyowani, yakaoma nzira iyo inotora nguva yakawanda uye kuvhura yakawanda nzvimbo yekukanganisa uye zvisirizvo.
Iyo LG V10 ndiyo ichangoburwa LG smartphone kuti igamuchire iyo Marshmallow inogadziridza. Pamberi payo, LG yakagadzirisa iyo G4, G3, uye G Stylo nhare. Hatina ruzivo rwekuti zvichatora nguva yakadii iyo firmware nyowani isati yasvika mhiri kweKorea neTurkey, saka kwenguva iripo, ingo tarisa ziso kune ziviso inokukurudzira kuti uvandudze OTA
kuburikidza Android Chiremera
lg g4 kuburitsa zuva isu
maitiro ekuwana apuro wachi
chinotevera gasi chiteshi munzira yangu
Samsung inouraya mubatsiri wayo wekutanga wezwi, ichimisikidza Gear S3 uye Gear Sport kugadzirisa
Best Amazon Prime Day Smartwatch Deals: Samsung Kuona, Fitbit, Garmin uye nezvimwe
Chii chiri Chese Chikwata Chinosvika muAgile Testing?
Apple Music gadziriso inounza zvimwe iOS 14 maficha kune Android zvishandiso
Maitiro ekudzima KnockON (kaviri pombi kumuka) pane LG G3 uye dzimwe LG Android nhare
Pixel 3 inopisa uye inodzima pasi ichibhadharisa vamwe varidzi
Iyo iPhone 12 Pro inotakura inounza slip yekupera kwaNovember, asi Best Buy ichine stock
Ndiwo & apos; mutambo pamusoro peFacebook & apos; s Instant Mitambo chikuva paMessenger